Adobe Creative Cloud Express: Templates mara mma maka ọdịnaya mgbasa ozi ọha, Logos, na ndị ọzọ | Martech Zone
Mọnde, Febụwarị 21, 2022 Mọnde, Febụwarị 21, 2022 Douglas Karr
Mgbe Mari Smith kwuru na ọ hụrụ n'anya ngwá ọrụ maka ahịa na Facebook, ọ pụtara na ọ bara uru ileba anya na ya. Nke ahụ bụ nnọọ ihe m mere. Adobe Creative Cloud Express, nke amara dika mbu Adobe spark, bụ ihe ntanetị agbakwunyere n'efu maka ịmepụta na ịkekọrịta akụkọ a na-ahụ anya na-emetụta. Creative Cloud Express na-eme ka ọ dị mfe ịmalite site na ọtụtụ ndebiri na akụrụngwa ahaziri nke ọma maka ọdịnaya mgbasa ozi ọha, akara ngosi, na ndị ọzọ.
Site na Adobe Creative Cloud Express, ị nwere ike ịmepụta eserese ọhaneze, akara ngosi, akwụkwọ ozi, ọkọlọtọ, akụkọ Instagram, mgbasa ozi, ọkọlọtọ YouTube, akwụkwọ mmado, kaadị azụmaahịa, YouTube Thumbnails na ndị ọzọ. Ikpo okwu nwere ọtụtụ puku ndebiri yana onyonyo enweghị eze nke ị nwere ike iji.
Ozugbo ịbanye na iji Adobe ID ma ọ bụ nbanye mmekọrịta, ị nwere ike ịmalite ọrụ ọhụrụ ma ọ bụ nweta ọrụ mbụ ị malitelarị ma ọ bụ mechaa. Ewubere ikpo okwu maka onye na-abụghị onye nrụpụta, na-enye gị ohere ịme ihe ọ bụla ị chọrọ, niile n'otu ebe, na ngwaọrụ nwere ọgụgụ isi na-enye gị ohere iwepu ndabere, ederede animate, tinye akara gị, na ọtụtụ ndị ọzọ. Naanị obere mgbatụ ole na ole ị nwere ike megharịa ọdịnaya maka saịtị mgbasa ozi ọ bụla wee tinye nsonaazụ ogo Adobe Photoshop na ọnyà.
Ị nwekwara ike ịkọrọ ndị otu gị akara, mkpụrụedemede na ihe ndị ọzọ, wee bipụta ma kesaa akwụkwọ PDF na njirimara Adobe Acrobat kwadoro - ka ị nwee ike itinye ọrụ gị kacha mma mgbe niile. Si na ikpo okwu desktọpụ rụọ ọrụ ma ọ bụ budata nke ọ bụla n'ime ngwa mkpanaka ka ịmalite!
Adobe Creative Cloud Express Creative Cloud Express iOS Creative Cloud Express gam akporo
Tags: Adobe okike ígwé ojii expressAdobeAdobe AdobeAdobe n'ike postAdobe n'ike videomgbasa ozividiyo na-eseasiakaadị azụmahịamepụta eseresemepụta eserese mgbasa ozi ọhadezie vidiyoNdị na-agba umeinstagram akụkọlogosakwụkwọ ịma ọkwaịkọrọ akụkọihe osiseịkọ akụkọdezie vidiyoakụkọ weebụọkọlọtọ youtube